Jechoota Mugaabee keessaa muraasa - BBC News Afaan Oromoo
Jechoota Mugaabee keessaa muraasa
''Afriikaan imperiyaalistoonni osoo hin qoqqoodin bakka dura turtetti deebi'uu qabdi. Kun qoqqoodinsa nam-tolcheedha. Yaadrimee paan-Afrikaanummaan buqqisuu qabna.'' - Hasawa Saalsibariitti 1962tti taasisan.
''An ammayyuu Hitlar yeroo kanaati. Hitlar kun ammoo kaayyoo tokko qofa qaba: uummata isaaf haqa, birmadummaa, walabummaa beekamtii qabuu fi qabeenya uumaamaa isaanii irratti mirga kennuudha. Kun Hitlar ta'uudha taanaan, dachaa kudhan Hitlar ta'uun barbaada. Yeroo kudhan, wanti dhaabannuuf kana.'' Awwaalcha ministeeraa irratti hasawa taasisan, 2003
''Diingadeen keenya dachaa dhibba, diinagdee waliigalaa Afriikaarraa kan fooyya'edha. Afriikaa Kibbaa malee, biyya kamtu akka Zimbaabwee bareedaadha? ... Amma kan dhibame, gabaarraa meeshaaleedha - kanuma qofa.'' Gaaffiifi deebii, 2007
''Waaqatu na muude, isatu na kaasa - MDC's miti, warra Biriteenis miti. Waaqa qofaatu na buusa!'' - Duula filannoo, 2008. MDC'n paartii mormituuti.
''Yeroo hedduu du'eera - yeroo kana egaa kan Kiristoosin injifadhe. Kiristoos al tokko du'e, al tokkos ka'e.'' - raadiyoo biyyaalessaarra waggaa 88ffaa enna kabajan.
''Nama aangoo dhaalu qopheessuu? Paartii demookraatawaa tahe keessa, hooggantoota haala kanaan hin muudnu. Kan aangotti dhufan uummataani.'' Gaaffiifi deebii TV, 2016